Orenburg labantu: labantu, umsebenzi, isakhiwo
Manje osehlala Orenburg? Yini amamethrikhi kukhona isici lezibalo leli dolobha? Kulesi sihloko uzothola ukuthi inombolo, ukukhula nokwakheka kazwelonke linabantu Orenburg.
Kancane mayelana edolobheni
Orenburg main nasemzini Orenburg esifundeni. Sise confluence emfuleni ku Ural Sakmara. He is isikhungo lesifunda. Orenburg ibambisene imizana 11.
City wathola igama layo kusukela GPL emfuleni, loMfula lakhiwa ngo-1735 zazo. Yena kwakubaluleke kakhulu, njengoba kwakunjalo ukuvula ukuhweba umzila eBukhara futhi ikhonze njengomPristi ukuvikelwa imihambuma.
Ngemva kwalokho, lo muzi waphinde idluliselwe izikhathi ezimbili ngaphezulu, waze wagcina ezingxenyeni SAKMAR River e 1743. ngokushesha Waba maphakathi esifundazweni. Ekupheleni kwekhulu XIX labantu Orenburg kwaholela ukuhweba ngempumelelo ne Central Asia. Lo muzi ubizwa ayenziwa wokusanhlamvu lesikhumba umkhakha, esikhiqiza uwoyela. New push for kuvulwa amabhizinisi zezimboni amandla ukutholakala uwoyela negesi.
Inani labantu base-Orenburg
imfundo kaMasipala sehlukaniswe iNyakatho neNingizimu County, inani eliphelele izakhamizi kabani izinqolobane zabantu ayizinkulungwane 15.6. Ngokwakhe isikhungo lesifunda ihlanganisa indawo cishe 260 amakhilomitha square. Inani labantu base-Orenburg abantu 562.569.
I sincipha ngokushesha bendawo laligujwa kusuka 1998 kuya 2008. Kusukela 2009, yaqala ukwandisa futhi ngalesi sikhathi lenyuka cishe 30 000 abantu. ukwanda Yemvelo has a mkhuba omuhle. Isibalo ukubeletha onyakeni odlule kuya ngaphezu 1,200 inani lokufa. Ngokusho le nkomba, idolobha ithatha 44 endaweni th e-Russia.
Isibalo sabesifazane ayizinkulungwane 50 ezingaphezu kuka inani lamadoda. Ngokuya 2013 Imishado zenziwa ezikhathini ezimbili ezingaphezu kuka isehlukaniso zenzeka. Ngokwesibonelo, izibopho zomkhaya uphawu imibhangqwana mayelana 4,600, futhi ohlukanisile - 2360. kuphela Ngokwe Ukwakheka yobuhlanga labantu Orenburg ku 80% Russian. Phakathi anabambalwa ngokohlanga yibona AmaTatar - kukhona mayelana 7.8%, okuyinto abantu abangaphezu kuka-40 eziyinkulungwane. Greater kuka-1% are Kazakhs, Ukraine futhi Bashkirs. Umuzi futhi iyikhaya Armenia nezinye Mordvinians yobuhlanga.
Employment Orenburg labantu
izakhamuzi enamandla ezakha abantu 345 000. Isibalo bayizakhamuzi gokweminyaka kuyasebenza - abangaba yizigidi ezingu-97, izakhamuzi asele sokumpeshena. Ngokusho idatha ye-2014, edolobheni kwadingeka izikole 101 nge wabhaliswa abafundi phezu 56.000.
Ngu ezingeni elikhangayo imvelo ezisemadolobheni Orenburg liyavela indawo 101-th phakathi nezinye ezindaweni ezithile kuleli zwe. Kuyinto phambili idolobha ezimbonini nge endaweni athuthukile igesi (nokukhiqizwa nokuqhutshwa), umkhakha ukukhanya, amakhemikhali nokudla izimboni, isakhiwo umshini futhi ngensimbi. Ngo-2016, isilinganiso komholo wenyanga womuntu zaba ama-ruble ayizigidi 26.7. Umuzi endaweni kakhulu okufunekayo yokukhiqiza okukhethekile izikhundla kwezohwebo. Futhi, kukhona isidingo emkhakheni wezokwelapha, ukwakhiwa, nokuphatha phezulu.
Mordovia labantu: labantu, Ukwakheka yobuhlanga, kuvikeleka kutenhlalo
Imvume yesabelo sogu zone - lena ithuba lokungenela ibhizinisi elisha, noma ukuvuza we-dolobha yezwe?
Komholo Petersburg North-West Federal District
IVolga: Population and Umnotho
Incazelo: ezezimali - kuba imali, imali. Ukwakhiwa bese usebenzisa Ezezimali
Cafe "Dream" (Nizhny Novgorod): Ikheli, amamenyu, amasevisi
Ngikuphi okuhlukileko kuneGreyidini Amalungu republic kamongameli? Imiqondo nezibonelo
I-Tsokkos Paradise Village (Ikati A) 4 *. Ayia Napa: ukubuyekezwa kwabavakashi
Indlela wenze itafula isixwayisi ngezandla zakhe?
Amathiphu mfunda-makhwelo engadini. Lapho utshalwe umkhosi?
Kuye kwanyatheliswa izincwadi izifundo: libizwa kanjani izinkondlo ngaphandle imvumelwano?
Chainsaw "Ural": kudivayisi umshini emotweni lapho kuhlanganiswa khona umoya nomusi kaphethiloli ukulungiswa
"Peritol": yokusetshenziswa zomuthi, intengo kanye analogue. Impendulo yakho ibe yimpumelelo yini "peritol" ngoba kwesisindo
Dress gabardine. Izici, izinzuzo, kukhethwa isitayela